Ohafia Archives - NDỊ IGBO KWENU
Home / Tag Archives: Ohafia
June 3, 2016	Ala Igbo, Featured Comments Off on Ikperikpe Ọgụ!
Ikperikpe Ọgụ! Egwú dike na-agba. Egwú anyị ji eje agha. Egwú eji amaara ndị n’adịghị atụ ụjọ. Egwú ụmụigbo ji enye ndị nna nna anyị otito. Ikperikpe Ọgụ anyị ji dị ebube. Omenala eji maara anyị. Egwú nwa ji echeta na nna ya bụ onye mmeri. Egwú anyị gbara maka ...